गजल – Page2– आभास
टुक्राटुक्री समाचार त्यो सोर्दै थियो कलम भ्रस्ट नेता एक छेउमा कोर्दै थियो कलम डुबेकै हो त मुलुक ! नीति नियम बेगर षड्यन्त्र र जाल साजि फोड्दै थियो कलम हात परे मोटा बिट्टा नगदको अहो ! तथ्य नंया आयाम सहित मोड्दै थियो कलम बोक्रे कलमजीबी बरु पोख्न छाड विचार तरबारसंग नाता साइनो जोड्दै थियो कलम !!
अरु हास्दा तिमि रुन्छौ , यहि हो इन्जिनियरिंग ! जांच अघि किताब छुन्छौ , यहि हो इन्जिनियरिंग ! भ्याईदैन जस्तो लाग्छ पढी जांच सम्म अनि छोटो Topics चुन्छौ, यहि हो इन्जिनियरिंग ! भेजा हुन्छौ पढेर वाक्क ब्याक्क दिक्क र त फेबुकमा Online हुन्छौ, यहि हो इन्जिनियरिंग ! जति राम्रो गरे पनि परिक्षामा तिमीले केवल पास …
इन्जिनियरिंग Read More »